Asomafo Nnwuma 25 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 25:1-27
Wodii Paul asɛm wɔ Festo anim (1-12)
“Mede asɛm no dan Kaesare!” (11)
Festo ne Ɔhene Agripa dwinnwen asɛm no ho (13-22)
Wɔde Paul begyinaa Agripa anim (23-27)
25 Enti Festo+ baa ɔmantam no mu, na obefii n’adwuma ase. Ne nnansa so no, ofi Kaesarea foro kɔɔ Yerusalem. 2 Na asɔfo mpanyin ne Yudafo atitiriw no baa ne nkyɛn, na wɔde nsɛm a wɔwɔ tia Paul no bɛtoo n’anim.+ Na wofii ase paa Festo kyɛw 3 sɛ ɔnyɛ wɔn adom, na ɔnsoma nkɔfa Paul mmra Yerusalem. Nanso na wɔabɔ pɔw sɛ wɔbɛtetɛw Paul wɔ kwan so akum no.+ 4 Ɛnna Festo kae sɛ wɔmma Paul nna afiase wɔ Kaesarea, efisɛ ɛrenkyɛ ɔno ara nso bɛkɔ hɔ. 5 Ɔkae sɛ: “Enti momma mo mu atitiriw no ne me nkɔ, na sɛ ɛyɛ ampa sɛ ɔbarima no ayɛ bɔne bi a, wɔabɔ no kwaadu.”+ 6 Enti bere a odii wɔn nkyɛn bɛyɛ nnawɔtwe anaa nnafua du no, ɔkɔɔ Kaesarea. Bere a ade kyee no, ɔtenaa atemmu agua so, na ɔkae sɛ wɔmfa Paul mmra. 7 Bere a ɔbae no, Yudafo a wofi Yerusalem bae no betwaa ne ho hyiae, na wɔkaa nsɛm akɛse bebree guu no so, nanso wɔantumi amfa ho adanse biara amma.+ 8 Na Paul yii ano sɛ: “Menyɛɛ bɔne biara a etia Yudafo Mmara anaa asɔrefi no anaa Kaesare.”+ 9 Ná Festo pɛ sɛ onya Yudafo no anim anuonyam,+ enti obisaa Paul sɛ: “Wopɛ sɛ wokɔ Yerusalem ma wodi asɛm no wɔ m’anim wɔ hɔ anaa?” 10 Ɛnna Paul kae sɛ: “Migyina Kaesare atemmu agua anim, na ɛha na ɛsɛ sɛ wodi m’asɛm. Menyɛɛ Yudafo no bɔne biara, sɛnea wo ara nso woahu no yiye no. 11 Sɛ meyɛ ɔbɔnefo ampa, na sɛ mayɛ biribi a enti ɛsɛ sɛ miwu a,+ merenka sɛ wonyaa me; wonkum me. Nanso sɛ asɛm a mmarima yi de ato me so yi mu biara nyɛ nokware a, ɛnde onipa biara rentumi mfa me nhyɛ wɔn nsa mfa nsɔ wɔn ani. Mede asɛm no dan Kaesare!”*+ 12 Ɛnna Festo ne n’afotufo kosusuw asɛm no ho. Bere a wowiei no, ɔka kyerɛɛ Paul sɛ: “Kaesare na wode asɛm no adan no,* enti Kaesare hɔ na wobɛkɔ.” 13 Nna bi akyi no, Ɔhene Agripa ne Bernike baa Kaesarea bekyiaa Festo maa no amo. 14 Ná wobedi nna pii wɔ hɔ, enti Festo de Paul asɛm no too ɔhene no anim. Ɔkae sɛ: “Ɔbarima bi wɔ ha a Felike gyaw no afiase. 15 Bere a mewɔ Yerusalem no, asɔfo mpanyin ne Yudafo mpanyimfo no de ne ho asɛm bɛtoo m’anim,+ na wɔsrɛɛ me sɛ mimmu no fɔ. 16 Nanso meka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɛnyɛ Romafo amammerɛ sɛ wobebu obi fɔ de asɔ wɔn a wɔabɔ no kwaadu no ani bere a onnyaa kwan nyii n’ano wɔ wɔn anim wɔ asɛm a wɔde ato no so no ho.+ 17 Enti bere a wobeduu ha no, mantwentwɛn me nan ase. Ade kyee ara na metenaa atemmu agua so kae sɛ wɔmfa ɔbarima no mmra. 18 Bere a wɔn a wɔrebɔ no kwaadu no sɔre gyinaa hɔ no, wofii ase kasae. Nanso bɔne a na misusuw sɛ ɔbarima no ayɛ no, ɛnyɛ emu biara na wɔde too no so.+ 19 Mmom ɔkwan a wɔn ankasa fa so som wɔn nyame* ho akyinnye bi na wɔne no gyei.+ Afei nso, wɔne no gyee akyinnye wɔ Yesu bi a owui a Paul ka no denneennen sɛ ɔte ase ho.+ 20 Ná minhu nea menyɛ wɔ akyinnyegye no ho, enti mibisaa no sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ Yerusalem ma wokodi asɛm no wɔ hɔ anaa.+ 21 Nanso Paul kae sɛ wɔmma ɔnna afiase nkosi sɛ Onuonyamfo*+ no bebua asɛm no. Enti mekae sɛ wɔmma ɔnna hɔ nkosi sɛ mede no bɛkɔ akɔma Kaesare.” 22 Na Agripa ka kyerɛɛ Festo sɛ: “Me ara mepɛ sɛ mitie ɔbarima no.”+ Ɛnna ɔkae sɛ: “Ɔkyena wubetie no.” 23 Enti ade kyee no, Agripa ne Bernike bae a wɔahyehyɛ wɔn ho kɔsɔɔ, na wɔne asahene ne kurow no mu atitiriw no kɔɔ baabi a wotie asɛm no. Afei Festo kae sɛ wɔmfa Paul mmra, enti wɔde no bae. 24 Na Festo kae sɛ: “Ɔhene Agripa ne mo a mo ne yɛn wɔ ha nyinaa, saa ɔbarima a mo ani tua no yi, ɔno na Yudafo no nyinaa de ne ho asɛm bɛtoo m’anim wɔ Yerusalem ne ɛha nso no. Ɔno na Yudafo no teɛteɛɛm sɛ ɛnsɛ sɛ ɔtena nkwa mu bio no.+ 25 Nanso mihui sɛ ɔnyɛɛ biribiara a enti ɛsɛ sɛ owu.+ Enti bere a ɔbarima no ara de asɛm no dan Onuonyamfo no, meyɛe sɛ mede no bɛkɔ akɔma no. 26 Nanso minhu asɛm pɔtee a menkyerɛw mfa ne ho nkɔma me Wura. Ɛno nti na mede no aba mo nyinaa anim no, titiriw wo, Ɔhene Agripa, na sɛ wohwehwɛ asɛm no mu wie a, manya biribi akyerɛw. 27 Efisɛ mihu sɛ ntease nnim sɛ mede ɔdeduani bɛkɔ a merenkyerɛ asɛm a wɔde ato no so.”
^ Anaa “Mepɛ sɛ Kaesare nso tena asɛm no so!”
^ Anaa “Wopɛ sɛ Kaesare nso tena asɛm no so.”
^ Anaa “wɔn ankasa nyamesom.”
^ Ɛyɛ abodin bi a na wɔde ma Roma ɔhempɔn.
Asomafo Nnwuma 25